उपत्यकामा एकै दिन थपिए १०२ संक्रमित, १६ जना सम्पर्क विहिन ! «
उपत्यकामा एकै दिन थपिए १०२ संक्रमित, १६ जना सम्पर्क विहिन !
Published :6August, 2020 12:24 pm
काठमाडौं उपत्यकामा बुधबार साँझसम्म १०२ जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । उपत्यकामा एकै दिन सय भन्दा धेरे व्यक्तिमा कोरोना पुष्टि भएको यो पहिलो पटक हो। एकै पटक संक्रमितको संख्या बढ्दा अस्पतालमा शैय्या अभावले काठमाडौं उपत्यकामा मंगलबार संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये १४ जनालाई घरमै राख्नुपरेको थियो । उनीहरूमध्ये केहीलाई बुधबार बिहान केएमसी अस्पताल दुवाकोट र कीर्तिपुरको आयुर्वेद अस्पतालको आइसोलेसनमा राखियो ।